Abaningi namuhla bahlukumeza i-intanethi, beyifaka njengobungozi bendawo yonke. Ngokusobala, akukho lutho oluwusizo kulo, futhi uma lukhona, ludinga ukuvulwa lapho, njengoba lusizo (lusizo) lulahlekile ngokukrakra phakathi kwenkunkuma nemfucumfucu kokuqukethwe okungabaza. Cishe, mhlawumbe, kukhona iqiniso kulokhu, kodwa kuphela isabelo.
I-Inthanethi ibonisa ngokuqondile umsebenzisi. Uma ubheka uhlu lwamakhasi owavakashelayo ngaphambi kokuthi ususe umlando wokusesha ku-Yandex, ikakhulukazi isikhathi esingaphansi noma esingaphansi, ungenza isithombe esifaneleko somuntu osebenzisa le khompyutha. Njengoba bethi, oseshoyo uthola. Uma ungafuni ukuhamba kwakho ku-inethiwekhi ukuthi kutholakale noma ubani, kudingeka ufunde lo msebenzi olula. Futhi, ngaphezu kwesici somuntu, kunenye enye yobuchwepheshe, ephakamisa ukuthi umsebenzisi osebenzayo uhlanza umlando wokusesha ku-Yandex njalo ngezinsuku ezimbalwa ukuze alondoloze amandla okusebenza ajwayelekile we-PC yakhe.
Uma umsebenzi wakho ukufihla engxenyeni ethandekayo yokuthi awuzange usebenze kukhompuyutha, kodwa kunalokho kufaka izingosi, ngakho-ke inqubo elula yokuhlanza-ukususa amakhasi owavakashelayo-akwanele. Ngakho-ke, kuphi umlando wokusesha ku- "Yandex"? Vula ifasiteleni bese ubheka phezulu futhi ngakwesokudla, udonsela isithonjana esihle sekhanda, yilokho esikudingayo. Ukuchofoza kuso ngenkinobho yegundane lesokunxele, sithola iwindi ngezinketho zezenzo ezingenzeka. Cishe phakathi kohlu ungabona "Umlando". Ukuchofoza kule nto, ungakwazi kokubili ukususa umlando wokusesha ku- "Yandex" ngokuphelele, namakhasi ambalwa kuphela. Kungokusebenza kulesi siphequluli. Uma usebenza, isibonelo, ku-Google Chrome, kodwa sebenzisa le injini yokusesha, uhlelo lwesenzo luhlala olufanayo, ngokulungiswa kokubonakala kwesithonjana: ngeke lube yisihluthulelo, kodwa ukukhishwa okuthathu, kodwa kutholakala lapho. Kubasebenzisi abhalisiwe ohlelweni lwe-Yandex, uchungechunge lokusesha lunikeza ububanzi bamasevisi: kufaka lapho uthayipha isicelo, ukukhipha amakhasi akhethwayo, njll. Uma ufuna ukufunda ukuthi ungasusa kanjani umlando wosesho ku-Yandex (ukuze ungabonakali kubha yombuzo) , Bese uye ezilungiselelweni bese ususa amaki (amabhokisi okuhlola) ngokuphambene nalokho ongakhetha ngakho manje.
Uma umgomo ukugcina ukusebenza okuvamile kwekhompuyutha, ke ngaphezu kwamakhasi, kuzodingeka futhi ususe isilondolozi. Yiluphi uhlobo lwesilwane lokhu? Mane nje, umshini ohlakaniphile ukhumbula lezo zingosi ozivakashela kaningi kunezinye, futhi ugcina idatha evela kubo. Konke lokhu kugcinwa kwi disk yekhompyutha futhi kubuyekezwa kuphela njengoba kudingeka. Ngakho-ke, umsebenzi usheshisa futhi ithrafikhi igcinwa. Kodwa inkumbulo egcinelwe amalungiselelo anjalo inezinqolobane zayo, ezikude ezingenamkhawulo. Ukuqedwa kwezinkinga eziningi emsebenzini we-PC kuqala ngokuthi ufuna ukususa lezi "imisila". Silandela iskripthi esithi " Ungasusa kanjani umlando wokusesha ku-Yandex," kodwa kufanele sengeze umaka eduze kwesiphakamiso sokususa i-cache, ngendlela, ukugwema ukukhathazeka ngokususwa komlando, ungasebenzisa imodi ekhethekile "ye-Incognito", lapho zonke izindawo ezivakashelwe zingabonakali kuyo. Kuyinto elula - ngokufanayo ngokucindezela i-N, i-Ctrl ne-Shift.
Tar izinwele birch: isicelo, ukubuyekezwa, zokupheka
Perhydrol for amachibi: ngebuhle nebubi